Sida loo ogaado in qof ku jecel yahay laakiin uusan kuu sheegin | Ragga Stylish
Sida loo ogaado haddii qof ku jecel yahay laakiin kuu sheegi maayo
Waxaa jira dad xajiya xiriir jaceyl muddo dheer iyadoon waligood la cadeyn halka ay xiriirka ka yihiin. Waqti ka mid ah xiriirkaaga, mid ka mid ah xubnaha ayaa isweydiin kara ama doonaya inuu ogaado haddii qolada kale ku jeceshahay laakiin kuu sheegi maayo.
Way adag tahay in la garto xitaa bilowga xiriirka, haddii qof kula joogo kaliya galmo, ama soojiidasho ama sababtoo ah waxaa jira wax kale oo ka soo jeeda jacaylka. Way murgi kartaa marka qofkaasi ma doonayo xiriir deggan oo markaa had iyo jeer waa jiid jiid dagaal.
1 Sida loo ogaado haddii qof ku jecel yahay laakiin kuu sheegi maayo
2 Sida loo ogaado haddii xiriirku mugdi ku jiro
3 Sida loo ogaado inuu isagu doonayo inuu kula seexdo uun
Faahfaahintu aad ayey muhiim u tahay inaad awood u siiso kalsoonida xiriirka. Qofka kale waxaa laga yaabaa inuusan ahayn mid aad u faahfaahsan oo aan tilmaam u ahayn inuu dareemo wax dabiici ah. Waxa lagu cadeyn karaa waa in qofka ku jecel uusan waligiis sameyn doonin wax xun taasi waxay saameyn ku yeelan kartaa sharafta jirka ama maskaxda qofka aad jeceshahay.
Faahfaahinta la cadeyn karo waxaa ka mid ah qofkaasi had iyo jeer wuu ku dhageystaa. Laga soo bilaabo daqiiqad eber illaa hadda isagu markasta adiga ayuu ku raadinayaa, dareenkaaga, waxa kugu hareeraysan, cabsidaada iyo walwalkaaga. Dantu marwalba way socotaa oo wuxuu dhageystaa faahfaahinta ugu dambeysa.
Isku kalsoonow, tixgeli qorshayaashaada iyo soo-jeedimahaaga. Wuxuu jecel yahay inuu sheego sirtiisa, shucuurtiisa iyo dhibaatooyinka ka dhasha sababo la xiriira isku soo dhawaanshaha weyn ee uu doonayo inuu kula joogo. Wuxuu aad u qiimeeyaa ra'yi kasta oo la soo bandhigo si loo dhageysto, xitaa haddii uusan oggolayn, oo daqiiqad kasta wuxuu jecel yahay inuu maqlo waxaad u malaynayso ama aad u malaynayso.
Wuxuu jecel yahay inuu waqti badan kula qaato, maxaa yeelay wuu qiimeeyaa. Su’aal maaha galmada, laakiin wuxuu doonayaa inuu kula wadaago daqiiqado iyo faahfaahin. Taasi waa sababta waqti kasta oo aad u baahan tahay Halkaa u joogi doona taageerada ugu fiican iyo inaad garabkaaga garaacdo.
In kastoo ay umuuqato mid caqli-gal ah indhaha ayaa khiyaaneeya xaalada noocan ah. Aragtidiisa ayaa la hagaajin doonaa, wuu ku eegi doonaa adiga xitaa marka uusan u ekaan iyada iyo wixii ka sarreeya oo dhan Waxay ku noqon doonaan muuqaalkaas dhalaalaya oo dhoola cadeynaya, caadiga ah ee qof jacayl.
Qaabka uu kula dhaqmo ayaa gabi ahaanba ka duwan dadka kale. Waxaad ogaan doontaa in codkiisa uu ka duwan yahay, wuxuu leeyahay qaab ka duwan oo uu ku hadlo xitaa ereyada uu adeegsado way ka duwan yihiin. Qodob kale oo maskaxda lagu hayo ayaa ah marka aad ogaato inuu kuu xiisay, in markasta oo aad is aragtaan uu aad ugu faraxsanyahay kulanka. Tani waxay la mid tahay xaqiiqda ah inuu ku qanacsan yahay oo uu kaa fikiro markuu ku arki waayo.
Daacadnimadu waa hab kale oo lagu muujiyo waxa aad dareemeyso. Haddii ay lagama maarmaan tahay inaad u timaado difaacaaga, xitaa haddii ay tahay inuu cid ka caroodo, hubaal wuu sameyn doonaa. Waa dariiqiisa inuu muujiyo inuu ku ilaalinayo isla markaana uu ku hayo isku xidhkaas xeerar kasta.
Sida loo ogaado haddii xiriirku mugdi ku jiro
Xaaladdan oo kale, faahfaahin badan oo aan kor ku soo xusnay waa laga soo qaadan karaa rajooyin fudud oo yimaada oo taga. Si kastaba ha noqotee, way dhici kartaa inay yihiin tilmaamo yar yar oo muujinaya inuu ku jecel yahay, laakiin guud ahaan ma doonayo inay wax dhab ah kula socdaan.
Ma xiisaynayo ama xiiseynayo haddii aad had iyo jeer leedahay xiriir mugdi ku jiro, mararka qaarkood wuxuu leeyahay dabeecado la mid ah kuwa lagu sharaxay mararka qaarkoodna wuxuu kaa dhigayaa inaad fahamto waxa ka soo horjeedda. Wuxuu iska ilaaliyaa taabashada mowduucyada shaqsiga ah, sidaa darteed isagu inta badan waxba kama sheego noloshiisa gaarka ah, qoyskaaga ama asxaabtaada.
Uma jeedin in la sameeyo qorshooyin mustaqbalka ah, ama kuwo si hufan loo sharraxo. Sidoo kale isagu dadaal kuma bixiyo inuu diyaariyo waxyaabo kala duwan oo labadiinuba baashaal u noqon kara. Waxaad dareemi doontaa inuusan dooneynin inuu isku dhex daro nolol maalmeedkiisa sidaas darteed ma rabtid wax u dhigma noloshaada.
Sida loo ogaado inuu isagu doonayo inuu kula seexdo uun
Shaki la'aan tani waa sabab kale oo shaki uu ku imaan karo, hadduu kaa doonayo wax kale, ama kaliya uu doonayo inuu kula galmoodo. Waxaa jira calaamado si cad u muuqan kara oo gelin kara nooc xiriir ah feejignaan iyadoo aan la gaarin dhamaadka iyo wax aan ka badneyn waxa uu yahay, iyadoo aan la gaarin ballanqaadka.
Inta badan kulamadaada waxaad had iyo jeer galmooddaa iyo ku dhowaad dhammaan wada sheekaysigaaga, jidh ahaan iyo dhanbaal ahaanba, waxay had iyo jeer u jeestaan ​​ka hadalka galmada ama galmada.
Markaad kulmeyso inaad wada joogto markasta bogaadin loogu talagalay jirkaaga ama muuqaalkaaga ayaa guuleysta. Marar badanna, waa xisbiga kale ee had iyo jeer jecel inuu muujiyo sida jirkoodu yahay. Isagu ma joojin doono isku dayga inuu ku qabsado oo sariirta kuu dhigo.
Wadahadalku waa caajis Isagu weligiis ma xiiseeyo ka hadalka noloshiisa, mana xiiseeyo sida maalintaadu u dhacday, ama sidee tahay, ama wax kaa weydiiyaa arrin shaqsiyeed. Caadi ahaan isagu ma xiiseeyo noloshaada, ama wax kasta oo la xiriira saaxiibtinimadaada ama noloshaadii hore.
Haddii aad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato cilaaqaadka waad la tashan kartaa "sida loo ilaaliyo xiriirka masaafada dheerThewaxa la weydiinayo taariikhda ugu horeysa”. Hadaad jeceshahay xiisaha galmada iyo basbaaska leh lamaanahaaga waxaad ka heli kartaaciyaaraha ugu xiisaha badan ee lagu raaxeysto".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ogaado haddii qof ku jecel yahay laakiin kuu sheegi maayo
Sida loo ogaado haddii ninku ku jecel yahay